Hey’adda WFP oo raashiin nafaqeysan keentay Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Hey’adda WFP oo raashiin nafaqeysan keentay Muqdisho
Hey’adda WFP oo raashiin nafaqeysan keentay Muqdisho
Hey’adda qaramada midoobey u qaabilsan cunada ee WFP ayaa sheegtay in magaalada Muqdisho ay ka dejisay diyaarad xamuul ah oo sida raashiin nafaqeysan oo loogu talagalay dadka abaartu saameysay, cunadan nafaqada leh ayaa ah buskut-ka soo celiya durba nafaqada kuwaas oo lagu quudin doono 31,000 oo ruux muddo sadex beri ah.
Xamuulkan ayaa lagu keeney diyaarad nuuceedu yahay, Boeing 747 oo ay ku tabarucday shirkadda UPS Foundation oo fadhigeedu yahay Dubai, waxaana kamid ah gargaarka WFP ay keentay dalka dawo oo ay u soo wakiilatay hey’adda kale ee ay bah wadaagta yihiin ee WHO.
“Jawabtan deg dega ah waxaa ay taageero muhiim u tahay qoysaska abaaruhu saameeyeen ee ku nool Soomaaliya ,” waxaa sidaa sheegtay wakiilka WFP ahna gaasimaha xafiiska Khaliijka Abdallah Alwardat. Isagoo intaa ku daray “ Diyaaraddan xamuulka ah waxaa ay tusaale u tahay hey’adda WFP iyo hey’adaha kale in si wadajir ah u gaaraan dadka u baahan caawimaada.”
WFP ayaa sidoo kale, sheegtay in cunada ay muhiim u tahay dadka nugul gaar ahaan carruurta kuwaas oo ka barabaxay deegaanadii ay deganaayeen mana heli karaan raashiin iyo aqabka wax lagu karsado.
Sida qaramada midoobay laga soo xigtay qisastii, nus kamid ah tirada dadka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan 330,000 oo carruur ah ay heysato nafaqa daro, waxayna u baahan yihiin kaalmo deg deg ah.
Hey’adda cuntada u qaabilsan qaramada midoobay ee WFP ayaa xustay in maalmaha soo socda ay keeni doonto noocyo kale oo ah raashiinka nafaqeysan ah.
Previous articleGuddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed oo la kulmay naafada Qaranka
Next articleCHAN CUP: Soomaaliya oo maanta la ciyaareeyso Suudaanta Koonfureed